हरेक काठभित्र मूर्ती हुन्छ, मूर्ती देख्न महेशको जस्तो कला हुनुपर्छ  HamroKatha
हरेक काठभित्र मूर्ती हुन्छ, मूर्ती देख्न महेशको जस्तो कला हुनुपर्छ
महेशलाई यस्तो मूर्ती बनाउन मन छ जसले सबैको ध्यान खिचोस् र काष्ठकलाप्रति सबैको ध्यानाकर्षण होस् ।
सागर दाहाल २०७४ फागुन १७ गते १९:३९
हरेक काठभित्र मूर्ती हुन्छ । झन चाँप, कपुर र साल जस्ता रुखको काठभित्र असाध्यै सुन्दर मूर्ती हुन्छ । तपाईंले काठभित्र मूर्ती देख्नुभएको छ ? महेश शाक्यले देखेका छन् । उनी काठभित्रको मूर्तीलाई सतहमा ल्याउँछन् ।
काठभित्रको मूर्तीलाई सतहमा ल्याउन के गर्नुपर्छ ? त्यसका लागि कला हुनुपर्छ । महेश शाक्यमा त्यस्तै कला छ । २५ वर्ष भयो उनले काठका मूर्ती बनाउन थालेको ।
ललितपुर बुङमतीका हुन् महेश । ११ वर्षको उमेरदेखि मूर्ती बनाउन थालेका हुन् । २५ वर्ष भयो काठमा मूर्ती कुँद्न थालेको । आठ कक्षा पढेपछि उनले पढाई छाडे, मूर्तीकलामा लागे ।
उनका चार दाजुभाई मध्ये कान्छा र माईलाले पनि मूर्तीकलाकै साधना गरेका हुन् ।
ललितपुरको पुल्चोक स्थित अक्षेश्वर महाविहारमा ११ वर्षकै उमेरमा परम्परागत काष्ठकला प्रशिक्षण लिन पाए । मूर्तीकलामा दिल बस्यो, दिमाग पनि मूर्तीकलामै लाग्यो ।
यो २५ वर्षमा उनी सिद्धहस्त मूर्तीकार बनिसकेका छन् । महेशका अनुसार कतिपय मूर्ती यस्ता हुन्छन् जसलाई बनाउन दुईतीन वर्ष लाग्छ । जस्तो कि चक्रसंवर मूर्ती । यो एउटा मूर्तीभित्र ८० वटा मूर्ती हुन्छन् ।
उनकोमा वसुन्धराको मूर्तीको अर्डर आइरहन्छ । विशेषगरी पुरस्कारमा यो मूर्ती दिइन्छ । वसुन्धरा मूर्ती तीन लाख रुपैयाँसम्म पर्ने महेश बताउँछन् ।
उनले विभिन्न प्रकारका मुर्ती बनाएका छन् । खासगरी बुद्ध मूर्ती धेरै विक्री हुने गरेको छ । उनले ६ सयभन्दा धेरै मूर्ती बेचिसकेका छन् ।
महेशका मूर्ती स्वदेशमा भन्दा विदेशमा धेरै विक्री हुन्छ । अर्डर आएका मूर्ती बनाएर कार्गाे गरेर विदेश पठाउँछन् । खासगरी इटाली र चीनमा धेरै मूर्ती निर्यात हुने गरेको छ ।
मूर्ती बनाउन दिल र दिमाग दुवै लगाउनुपर्ने महेशको अनुभव छ । उनका अनुसार मूर्ती बनाउन एकाग्र ध्यान चाहिन्छ । ध्यान बिना मूर्ती बनाउन सकिँदैन । काठमा ससाना छिनो र विभिन्न उपकरणले खोप्ने, तास्ने गरेर मूर्ती बनाइन्छ । अलिकति गल्ती भयो भने मेहेनत खेर जान्छ ।
मण्डला बनाउन घटिमा पनि तीन महिना लाग्छ भने उनले बुद्धको सामान्य मूर्ती २३ दिनमा बनाउने गरेका छन् । उनले तीन लाख रुपैयाँसम्ममा मूर्ती बेचेका छन् भने सस्तोमा ६५ हजार रुपैयाँमा बेचेका छन् ।
मूर्ती बनाउन चाँप, कपुर र सालको काठ प्रयोग गरिन्छ । विदेश पठाउने मूर्तीमा सुनचाँपको काठ प्रयोग गरिन्छ । गुणस्तरीय काठ पाउन निकै गाह्रो हुने महेश बताउँछन् । खासगरी चाँपको काठ पाउन गाह्रो छ । सामान्यतया एउटा मूर्ती तीन किलोको बनाउँछन् महेश ।
मूर्तीकलाबाट महेशको जीवन चलेको छ । उनी भन्छन्, ‘मूर्ती बनाउँदा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ । मूर्ती बनाइसकेर हेर्न बस्छु, मलाई अपार आनन्द लाग्छ ।’
परम्परागत काष्ठकलाको विकास हुन नसकेकोमा महेश चिन्तित छन् । नयाँ पुस्ताले यो कलाप्रति रुची नदेखाउनु चिन्ताको विषय हो भन्छन् । तर, मूर्तीकलामा रुची हुनेहरुलाई चाहिँ महेशले प्रशिक्षण दिने गरेका छन् । अक्षेश्वर महाविहारमा उनी प्रशिक्षण दिन जान्छन्, जहाँ उनले ११ वर्षको उमेरमा प्रशिक्षण लिएका थिए ।
महेश अहिले गम्भीर सोंचमा डुबेका छन् । उनलाई यस्तो मूर्ती बनाउन मन छ जुन मूर्तीले सबैको ध्यान खिचोस्, काष्ठकलाप्रति मानिसहरुको ध्यानाकर्षण होस् ।
बुङमतीमा महेशजस्ता अरु धेरै छन् जसले परम्परागत काष्ठकला र मूर्तीकलालाई अगाडि बढाईरहेका छन् ।